Play online in Malaayiin Euro . Win malaayiin . : PlayLotteryOnline.info 2022
->>> Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan Malaayiin Euro
Ciyaarta waxa ay ka imanaysaa Europe . Boonooyinka ciyaari Malaayiin Euro ka iibsan kartaa in Australia , Belgium , Spain , France , Ireland , Luxembourg , Portugal , Switzerland iyo UK .
Coupons laga iibsan karaa , dabcan , waxaa kale oo dunida ku Internet-ka ee hab aad u sahlan . Just iska diiwaan on goobta ku lug iibinta ee rasiidh Malaayiin Euro . Batanka soo socda si Raayada , waxaad ka samayn kartaa . Marka lagu diiwaan goobta ku lug iibinta ee Malaayiin rasiidh Euro , waxaad dooran kartaa lambarada aad nasiib , tirada barbaro iyo taariikhda jiitaa lambarada soo xulay .
Isku aadka ugu horeeyay ee ka dhacay on 13.02.2004 ee Paris . Drawings yihiin in Paris Tuesday iyo Jimce kasta . Time barbaro Malaayiin Euro waa 21:25 ( GMT ) . Drawings laga qabanqaabiyaa Spain by Lottery bakhtiyaa s Aquestas des estada ee France by bakhtiyaa Francaise des Jeux (oo loo yaqaan hawlwadeen of dhowr ah oo khamaarka ee France ) . In bakhtiyaanasiibka UK waxaa qabanqaabiya Camelot .
Rules of ciyaarta :
Lambarada 5 group yihiin laga bilaabo 50 lambarrada ku jira mashiinka ee loo yaqaan Stresa . Intaa waxaa dheer , waxaa jira labo tiro oo barbar dhac laga bilaabo 1 ilaa 11 , kuwaas oo ku yaalla mishiinka Paquerette . Abaalmarinta ugu weyn ee uu yahay ugu yaraan 15 milyan euro , waa raasamaal bilowga ah ee Malaayiin Euro . Si aad ku guuleysato abaal marinta Grand , waa inaad u hit tirooyinka oo dhan . Bishii Juun 2007 , ayaa Malaayiin Euro furay ee Portugal iyo Ireland , adeeg dheeraad ah - Malaayiin Euro Plus . Ciyaaryahanka ayaa si lacag bixinta ee dheeraadka ah 1 Euro bilaabi kartaa laga dhirta oo dheeraad ah , thanks si taasoo ugu guulaysan karaan badh dheeraad ah oo milyan oo Euro ah .
Bishii July 2011 , Scotland , yimid Abaalmarinta ugu weyn ee Malaayiin Euro . Waxaa noqonayaan 185 000 000 million .
Itimaalka of badisay hits tirooyinka oo dhan iyo sidaas ku guuleysato raasamaal ugu weyn ee Malaayiin Euro waa 1:76,275,360
Itimaalka of garaacid ku tagay kasta oo ay yihiin 1 ilaa 24
July 31 , 2005 , iyadoo ay sabab u beeso ah 9 - laab Ghanna Malaayiin Euro Lotto ahaa 115 million euros . Tigidh oo ahaa iibsatay Garryowen , Limerick , Ireland iyo badisay ahaa Dolores ku wehlinayay ka . Waxaa dhacaya in ku guuleystay nasiib uma Abaalkiisuu ka heli . Markaas guushiisii ​​gudbinayaa aadka soo socda . Malaayiin Win Euro yihiin oo bilaa cashuur ah . Marka laga reebo Switzerland , halkaas oo aad leedahay si ay canshuur ku guuleystey bixiso